MON PHARMACY: ဆရာဝန်တွေအားလပ်ချိန်မှာ ဘာလုပ်ကြသလဲ?
ဆရာဝန်တွေ သူတို့ရဲ့အချိန်ကို ဘယ်လိုအသုံးချသလိုဆိုတာ သင်စဉ်းစားမိဖူးပါသလား။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာ မြင့်မြတ်တဲ့ခေါ်ဆိုမှုဖြစ်သော်လည်း အလုပ်နဲ့ သင့်ရဲ့နိုးကြားတဲ့အချိန်အများစုကိုရယူကာအားလပ်ချိန်အများကြီးယူပြ်ီး သင်တို့ကို ပစ်မထားပါဘူး။ သို့သော်ဆရာဝန်တွေလဲ လူပါပဲ။ တစ်ခြားလူတွေလိုပဲ တူညီတဲ့အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မွေ့လျော်တတ်ကြပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေရဲ့အားလပ်ချိန်(သို့) နားချိန်ပမာဏဟာသူတို့ရဲ့ ဆေးပညာကျင့်ထုံး၊ အထူးပြုပညာရပ်(သို့) သူတို့အခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီး ကြီးမားစွာကွဲပြားသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ- အမေရိကန်နဲ့ယှဉ်ရင်အီတလီ၊ ဂျာမနီကဲ့သို့ တိုင်းပြည်များမှာ နှစ်ကြိမ်(သို့) သုံးကြိမ် လစာပေးအားလပ်ရက်များပိုများတတ်ပါတယ်။ အချိန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဟာ အားလပ်ချိန်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအသုံးချရန် သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဆေးပညာအဖွဲ့အစည်းက အမေရိကန်နိုင်ငံသမားတော်ကြီးများအကြား သူတို့ရဲ့အလုပ်၊ဘဝ မှတ်တမ်းအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူတိုရဲ့ကြာရှည်တဲ့အလုပ်ချိန်များနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုရှိသော်လည်းပဲ ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုဟာ အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံတစ်ရက်ဖြစ်ကြောင်း အသက်အရွယ်အလိုက် ရလဒ်များထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
အသက်၄၀အောက်သမားတော်များဟာ ပြေးခြင်း(သို့) ရွရွပြေးခြင်း(jogging)ကို နှစ်သက်ကြပြီး အသက်၄၀နဲ့၅၉နှစ်ကြားအရွယ်က ပြေးခြင်း(သို့) ရွရွပြေးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းအပြင် ရွက်ဖျင်တဲထိုးပြီး ပြင်ပလေ့လာအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှု (camping)နဲ့ တောင်တက်ခြင်းတို့ကို သဘောကျကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အသက်၆၀အထက် သမားတော်များရဲ့ ထက်ဝက်ကတော့ လမ်းလျှောက်ခြင်းကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့် ဆရာဝန်များဟာ ဈေးကြီးပြီး စမတ်ကျဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အားကစားများဖြစ်တဲ့ ဂေါက်ရိုက်ခြင်းနဲ့ နှင်းလျှောစီးခြင်းကိုသာ ထိတွေ့တတ်တယ်လို့ လူသိများတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖီလာနေပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်လိုက်တဲ့အခါ ဆရာဝန်အနည်းငယ်မျှသာ အဆိုပါအားကစားများနဲ့ထိတွေ့မှုရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
လူနာတွေရဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းများ၊ ဆေးပညာလေ့လာမှုများ၊ ဆေးစာအုပ်များနဲ့ အလားတူအရာများမှာ စိတ်နှစ်ထားတတ်ကြသော်လည်း အသက်၄၀အောက် သမားတော်ထက်ဝက်ကျော်ဟာ အားလပ်ချိန်မှာ စာဖတ်ခြင်းကို ခုံမင်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အသက်အုပ်စုထက်ပိုကြီးလေလေ အရေအတွက်များ ဆက်လက်တိုးပွားလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်များကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အခြားလှုပ်ရှားမှုများမှာ အိမ်ပြု ပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ချက်ပြု တ်ခြင်းနဲ့ တေးဂီတတူရိယာတီးခတ်ခြင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။
အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုပြု လုပ်ရန် အချိန်ရရှိနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ လူနာတွေရဲ့ရက်ချိန်းတွေကို စီမံသကဲ့သို့ သူတို့ရဲ့အချိန်ဇယားကိုလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ စီစဉ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရရှိနိုင်မဲ့ကန့်သတ်ချိန်ဟာ အဖိုးတန်တဲ့အတွက် ဥာဏ်အမြော်အမြင်ရှိစွာ အသုံးချသင့်ပါတယ်။
❀အောက်ပါနည်းလမ်းများက ဆရာဝန်များ သူတို့အားလပ်ရက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အကြံပြု ချက်၃ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်အတွက် အလုပ်ချန်ထားမယ့်အစား ဒီနေ့ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
၂။ တစ်ပတ်လုံးရဲ့ လုပ်စရာရှိတာတွေကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ပါ။
ဆရာဝန်တွေက အချိန်နဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီး လုပ်စရာမလိုတဲ့အရာတွေ(ဥပမာ- စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ခြမ်းခြင်း၊ အဝတ်လျှော်ဖွတ်ခြင်း)စတဲ့အသေးအမွှားကိစ္စရပ်များကို စနေတနင်္ဂနွေရက်မျိုးတွေမှာ အပြီးသတ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတဲ့တစ်ပတ်လုံးမှာ လုပ်ရမယ့်အမှုကိစ္စများကို စနစ်တကျသေချာစီမံကွပ်ကဲခြင်းဖြင့် အလုပ်နားရက်မှာ အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အချိန်တွေပိုမိုရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ အရာအားလုံးကို စနစ်တကျစီမံကွပ်ကဲတတ်ပြီး မျက်ခြေမပြတ်သိရှိနားလည်အောင်လုပ်ပါ။
အလုပ်ကပိုပြီး စနစ်တကျစီမံထားရင် လုပ်ဆောင်မှုပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြီးမြောက်ပါလိမ့်မယ်။ အရေးပေါ်နဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်များရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုစာရင်းကို စနစ်တကျပြုစုထားခြင်းဟာ တနေရာတည်းမှာ သင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအားလုံးကို စုစုစည်းစည်းထိရောက်စေပြီး ပို၍စီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူစေပါတယ်။
တန်းစီခြင်းနဲ့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းမှာ အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကုန်ခံမဲ့အစား ဘယ်နေ့မှာ တန်းစီတာအမြန်ဆုံးဖြစ်မယ့်အချိန်ကို ရှာဖွေပါ (သို့) တစ်ခြားလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးရွေးချယ်သွားလာခြင်းဖြင့် သင့်အလုပ်အတွက် အကျိုးအမြတ်၊အခွင့်အရေးတွေ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကော်ဖီသောက်ချိန်နဲ့နေ့လယ်စာနားတဲ့ အချိန်အတွင်း အွန်လိုင်းကနေ ဈေးဝယ်ခြင်း(သို့) သင်လိုချင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်ချိန်တည်းမှာ တစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငွေပေးချေမှုစင်တာကို မောင်းသွားပြီး သင့်အလှည့်ကိုစောင့်ဆိုင်းကာ တန်းစီရပ်ရမဲ့အစား အွန်လိုင်းကနေ ငွေပေးချေမှုကိုလည်း ပြု လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်ကို ဦးစားပေးမှုနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် စနစ်တကျစီမံထားခြင်းဖြင့် ဆရာဝန်များလည်း သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိသားစုနဲ့အတူ သူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်လုပ်ဆောင်မှုများကို ပျော်ရွှင်ခံစားဖို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
(Reference- What do doctors do in their free time? Written by Jane Wright ,MIMS)
Posted by San Mishell at 8:07 PM